နုပျိုလန်းဆန်းနေတဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းနေတဲ့ ခြူးလေး - Cele Platform
နုပျိုလန်းဆန်းနေတဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းနေတဲ့ ခြူးလေး
MRTV-4ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကနေတစ်ဆင့် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ နှလုံးသားထဲကို ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်သွားခဲ့တဲ့ သူလေးကတော့ သရုပ်ဆောင်ခြူးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ သူ့မရဲ့ အနုပညာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်လေးနဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကြောင့်အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာအောင်မြင်လာခဲ့ပြီး ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို တစ်ခဲနက်ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို အပီပြင်ဆုံးနဲ့ သဘာဝအကျဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားသရုပ်ဆောင်နိုင်သူလေးလည်းဖြစ်သလို သူမရဲ့ အကယ်ဒမီရှော့ခ်အိုက်တင်လေးတွေကလည်း ချစ်ပရိတ်သတ်တွေကိုအကြိုက်တွေ့စေခဲ့ပြန်ပါတယ်နော်။ လတ်တလောမှာတော့ သူမဟာ ကြော်ငြာလေးတွေရိုက် ပွဲလေးတွေတက်ဖြစ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပြီးတော့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်နော်။
အခုတစ်ခါမှာလည်း သူမဟာ သူမချစ်တဲ့ ချစ်ပရိတ်သတ်တွေအတွက် သူမရဲ့ အလှပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေပေးနေကျအတိုင်း မျှဝေပေးထားတာကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်နော်။ လူငယ်ဆန်ဆန်နဲ့ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ ကောင်မလေးအဖြစ်နဲ့ သူမရဲ့ချစ်ပရိတ်သတ်တွေကို ဖမ်းစားခဲ့တာပဲဖြစ်ပြီးတော့ ပရိတ်သတ်တွေလည်း နှုတ်ခမ်းနီမလေး ခြူးလေးကို အချစ်န်ုရင်ခုန်နေခဲ့ရပါတယ်နော်။ ကဲ…. ဘ်ာလိုနေနေချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းနေတဲ့ ခြူးလေးရဲ့သဘာဝကျကျအလှပုံရိပ်လေးတွေကို ချစ်ပရိတ်သတ်တွေအတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။Myanmarload
MRTV-4ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲကနတေဈဆငျ့ ပရိတျသတျတှရေဲ့ နှလုံးသားထဲကို ဝငျရောကျသိမျးပိုကျသှားခဲ့တဲ့ သူလေးကတော့ သရုပျဆောငျခွူးလေးပဲဖွဈပါတယျနျော။ သူ့မရဲ့ အနုပညာကိုတနျဖိုးထားတဲ့စိတျလေးနဲ့ ကွိုးပမျးအားထုတျမှုတှကွေောငျ့အခြိနျတိုတိုအတှငျးမှာအောငျမွငျလာခဲ့ပွီး ပရိတျသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို တဈခဲနကျရရှိခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ကရြာဇာတျရုပျကို အပီပွငျဆုံးနဲ့ သဘာဝအကဆြုံးဖွဈအောငျကွိုးစားသရုပျဆောငျနိုငျသူလေးလညျးဖွဈသလို သူမရဲ့ အကယျဒမီရှော့ချအိုကျတငျလေးတှကေလညျး ခဈြပရိတျသတျတှကေိုအကွိုကျတှစေ့ခေဲ့ပွနျပါတယျနျော။ လတျတလောမှာတော့ သူမဟာ ကွျောငွာလေးတှရေိုကျ ပှဲလေးတှတေကျဖွဈနတောကိုလညျးတှရေ့ပွီးတော့ ပရိတျသတျတှအေတှကျ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှနေဲ့ စဉျဆကျမပွတျကွိုးစားနခေဲ့ပါတယျနျော။
အခုတဈခါမှာလညျး သူမဟာ သူမခဈြတဲ့ ခဈြပရိတျသတျတှအေတှကျ သူမရဲ့ အလှပုံရိပျလေးတှကေို မြှဝပေေးနကေအြတိုငျး မြှဝပေေးထားတာကိုတှရေ့ပွနျပါတယျနျော။ လူငယျဆနျဆနျနဲ့ လှတျလပျပေါ့ပါးပွီး ခဈြစရာကောငျးလှနျးနတေဲ့ ကောငျမလေးအဖွဈနဲ့ သူမရဲ့ခဈြပရိတျသတျတှကေို ဖမျးစားခဲ့တာပဲဖွဈပွီးတော့ ပရိတျသတျတှလေညျး နှုတျခမျးနီမလေး ခွူးလေးကို အခဈြနျုရငျခုနျနခေဲ့ရပါတယျနျော။ ကဲ…. ဘျာလိုနနေခေဈြဖို့ကောငျးလှနျးနတေဲ့ ခွူးလေးရဲ့သဘာဝကကြအြလှပုံရိပျလေးတှကေို ခဈြပရိတျသတျတှအေတှကျပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။Myanmarload
နာဂဒေသအတွက် အခြေခံဆေးဝါးနဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေ အလှူခံနေတဲ့ ခင်သဇင်